Izindaba - Ungazikhetha kanjani izingane ezisula?
Ngezinyathelo ezilula ezi-4, zikufundise ukuthi ukhethe ukusula okuphephile!
1: Bheka izithako nokupakisha.
Abazali kufanele bathenge ukusula okumanzi kwezinsana eziteshini ezijwayelekile, futhi kufanele bazibheke ngokucophelela lapho bekhetha:
Ngezithako zomkhiqizo, kungcono ukhethe imikhiqizo ebhalwe ngokusobala ukuthi ayinazo izithako ezingaphephile ezifana notshwala, ama-flavour, nama-fluorescent agents.
Ngokupakisha umkhiqizo namanyuwali, khetha imikhiqizo kubakhiqizi abajwayelekile enekheli lefekthri elinemininingwane, inombolo yocingo yesevisi, amazinga ezokuhlanzeka, amazinga wokuqalisa, namalayisense afanele okuthuthwa kwendle avela kumnyango wezempilo.
2: Phunga iphunga.
Zama ukungakhethi ama-wipe womntwana aqukethe iphunga elinamandla noma iphunga elibi njengotshwala.
Q: Buza ngokuhlangenwe nakho kanye nezithako.
Ukusula okuhle okumanzi ngeke kubangele ukucasuka kwesikhumba njengokubomvu, ukuvuvukala nokushaywa. Uma sezivele lezi zimpawu, kunconywa ukuthi uyeke ukuzisebenzisa ngokushesha.
Lapho uthenga noma ushintsha uhlobo lokusula okumanzi okokuqala ngqa, ungabuza okuningi ngesipiliyoni sokusebenzisa omama abaseduze kwakho, futhi futhi uthintane nomsizi wesitolo noma abasebenzi benkonzo yamakhasimende.
3: Thinta indaba.
Khetha izesuli zengane ngezinto ezithambile futhi kungabi lula ukuzigobhoza, ukuze ulwazi lomntwana luzohlala kahle;
Ngasikhathi sinye, ukusula okumanzi okunezithako ezilula kufanele kungabi okunamathelayo futhi kungabi namafutha lapho kusulwa ezandleni zakho. Uma amanzi acindezelwe enamafu futhi enama-viscous, kungenzeka ukuthi kunezelwe izithako eziningi kakhulu.
Isikhumba sengane sibucayi futhi siyazwela. Uma kunesidingo, abazali bangayithenga bese beyizama ngaphambi kokuthatha isinqumo.
Zonke izithako zimakwa ephaketheni, ngaphandle kokugcinwa kwamakhemikhali, bese kusetshenziswa yonke ifomula yezitshalo.
Yize singekho isidingo sokufaka ilebula kuzo zonke izithako ekufakweni kwama-baby wipe e-China, eYurophu, eTaiwan, e-China nakwezinye izindawo, ama-wipe amanzi angabaphathi bemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba, futhi kuphoqelekile ukufaka ilebula kuzo zonke izithako.
Ama-pei'ai wipes adinga izindinganiso eziphakeme nezidingo eziqinile ngokwabo, abhale zonke izithako, ahloniphe ilungelo labathengi lokwazi, ukuze wonke umama akwazi ukuzikhethela futhi azisebenzise ngokukhululeka.